﻿ ‘म राजनीतिमा फुत्त देखिएको पनि होइन र नगर सचिव मागेको पनि होइन’
‘म राजनीतिमा फुत्त देखिएको पनि होइन र नगर सचिव मागेको पनि होइन’
- काशीनाथ दंगाल
आइतबार १५, भदौ २०७६
म ४६ सालमा जनता माध्यमिक विद्यालय भण्डारी डाँडा बतासे खोटाङको अखिलको प्रारम्भिक कमिटीको सचिव हुँदै, सुकुना बहुमुखि क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्य हुँदै मैले राजनिती बुझेको हो ।
मेरो वुवा ५४ सालमा तत्कालिन एमालेले गाविसमा उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको थियो । वुवा, हजुरवुवा र दाजूहरुबाट सिकेर म राजनितिमा लागेँ ।
म शहिद परिवारको सदस्य । मेरो परिवार अहिले पनि सारा सम्पत्ती छोडेर विचल्लिमा छ । कोही भाई गाइघाट बस्छन् । म समय क्रममा इटहरी आइपुगेँ । मेरो दाई खोटाङको जिल्लाको सचिव हुनुहुन्छ नेकपाको । पहिले नेकपाको कार्यवाहक उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । भाई पनि जिल्ला कमिटीमा सचिवालय सदस्य छ त्यहीँ ।
म एक्कासी राजनीतिमा आएको मानिस भनेर प्रचार भयो । खोटाङमै बसेर राजनिती गरेको भए मलाई यो प्रश्न सायद हुँदैनथ्यो होला । मेरो सबै कुरा सबै नेताहरुले बुझ्नु भएको छ । तर यहाँ चाहि तेस्रो ग्रहबाट कोहि मान्छे झरेर मेरै पो केही खाइदियो की भन्ने हिसाबले अलिकती कुप्रचार गरियो ।
तर मेरो भावनामा रतिभर खोट छैन । मेरो उद्देश्य भनेको पार्टी बनाउने हो । पार्टीले मलाई अहिले टोल कमिटीमा गएर काम गर भन्दा म त्यसका लागि पनि तयार हुन्छु । पार्टीेले तँ चुप लागेर बस भन्यो भने पनि म त्यसका लागि पनि तयार हुन्छु ।
म त पार्टी बन्छ भने मृत्युवरणका लागि कसम खाएर लागेको मान्छे पो हुँ ।
अहिले बिहान उज्यालो हुँदादेखि राती १० बजेसम्म मेरो पारिवारीक जिन्दगी पनि छैन । मेरो श्रीमतीले जागिर गर्नु हुन्छ । उसँग पैसा मागेर गाडीमा पेट्रोल हालेर अहिलेसम्म पार्टीको सामाजिक काम मात्रै गरेको छु ।
क्षेत्रीय कमिटिमा थिएँ, यहाँ वडा सदस्य भएँ
म इटहरी ६९ साल तिर झरेको हुँ । यहाँ आउनु भन्दा अगाडी खोटाङमा क्षेत्रीय कमिटीको सदस्य थिएँ । त्यो बिचमा मैले पार्टीको गाउँ कमिटी, इलाका कमिटीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर काम गरेँ ।
मलाई के लागेको थियो भने म क्षेत्रीय कमिटीमा बसिसकेको, अखिलको विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको, पार्टी बुझेको इमान्दार कार्यकर्तालाई पार्टीले खोजेर काम देला । तर ६–८ महिना सम्म पनि पार्टीमा मेरो खोजी भएन । पार्टीको जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुन्थे, थाहा पाएसम्म म त्यहाँ पुग्थेँ र काम गर्थेँ ।
इटहरी ५ नं. वडा कमिटी गठन हुँदा मलाई ठमनाथ लम्सालले सचिवमा नोमिनेसन गर्न भन्नुभयो । क्षेत्रीय कमिटिमा बसिसकेको मान्छे कसरी वार्डमा जानु भन्ने भयो । तर भुगोल त बुझ्नु थियो । मैले नोमिनेसन दिएँ । तर पछि रामप्रसाद चौलागाई लगायतका नेताले भनेपछि सचिवको ठाउँ भिष्मलाई दिएर वार्डकमिटिको सदस्यमै भएपनि बसेँ ।
वार्ड कमिटीमा बसेर काम गरिरहँदा इमान्दारिता पुर्वक काम गरेँ । त्यो बेला सृजनशील धेरै काम गरेँ ।
त्यसपछि स्थानीय निर्वाचनको बेला पार्टीले अवश्यकता ठान्यो होला रेवती घिमिरे कम्रेडले नगर कमिटीको सदस्यको रुपमा मलाई मनोनयन गर्नु भएछ । मैले त्यहाँ लगिदिनुस् भनेको होइन ।
म नगर कमिटीमा गएपछि दुई तीन वटा बैठक पछाडी नै मलाई सचिवालयमा लगेर कार्यालय उपसचिवको जिम्मेवारी दिनुभयो । त्यो बेलामा त्यहाँ सचिवको भुमिका निभाउने कोही थिएन ।
मलाई नगर सचिव बनाऊ भनेर मैले कसैलाई भनेको थिइनँ
म कसरी नगर सचिव भएँ, यो मलाई नै थाहा छैन । मैले मागेको पनि होइन । तात्कमालिन एमालेको नगर अध्यक्ष रेवति घिमिरे कमरेडलाई यो विषयमा सोध्दा पनि हुन्छ ।
घिमिरे कम्रेड सचिव बस्न मान्नुभएन । तपाई सचिव बस्नुहुन्छ भने म प्रस्ताव गर्छु भन्नु भयो मलाई । मैले वहाँलाई प्रष्ट भनेको थिएँ, मलाई समय म्यानेज गर्न गह्रो हुन्छ । जनता स्कुललाई केही गरौँ भन्ने हिसाबले मैले योजनाहरु बनाएको छु । तर पार्टीले जिम्मेवारी नै दिन्छ भने पछि हट्दिनँ भनेँ ।
पछि पार्टीले मलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएछ । त्यसमा मेरो गुनासो पनि छैन । र मैले ठुलै चिज प्राप्त गरेँ भन्ने पनि होइन ।
पद होइन, भुगोलमा पार्टीको काम गरौं भन्ने हिसाबले गरेँ । कतिले चाहिँ भीम काम्रेडले मलाई त्यहाँ पुर्याएको हल्ला गरे । तर साँच्चै म भीम कम्रेडकै आश्रयले यहाँ आएको भए त मलाई पहिल्यै जिल्ला कमिटीको सदस्य नै बनाइदिन सक्नु हुन्थ्यो होला नि ।
मेरो लागि सबै सिनियर नेताहरु उत्तिकै आदरणीय हुनुहुन्छ । अस्ती चुनावको बेलामा कतिले मलाई रेवती भण्डारीको पक्षको मान्छे भने । वहाँको चुनावको तयारीमा लागेकोले त्यस्तो भने । सिनियर नेताज्यूले पार्टीलाईसमेत बनाएर अघि लाने हो । अनि तलका कमिटिहरुले भर्याङ बनेर सहयोग गर्ने हो, त्यो काम मैले गरेको छु र गरिरहनेछु । कसैलाई लडाउने वा रोक्ने कुनै कुरा छैन ।
कलेजको चुनावसँग जोडेर विपक्षीले कुप्रचार गरिदिए
जनता कलेजको सन्दर्भमा कम्रेड रेवती घिमिरे र कम्रेड भीम सुवेदी (सागर), कम्रेड याम सुब्बा अनि चन्द्र भट्टराई, जनता कलेजको पुर्व उपाध्यक्ष र नगर पार्टीको तर्फबाट म गरेर पाँच सदस्य एउटा कार्यदल गठन भएको थियो ।
त्यो कार्यदलले कलेजको व्यवस्थापन समिति बनाउने विषयमा नेपाली काँग्रेससँग पटक पटक छलफल गर्यो । मिलेर जानु पर्छ भन्ने टुंगो भयो । बहुमत लिनेले उपाध्यक्ष लिने र अल्पमतले अध्यक्ष लिने भन्ने सहमती भयो । तर काँग्रेसले विश्व रिजाललाई देखाएर अध्यक्ष कुनै हालतमा नछोड्ने भन्यो ।
त्यसपछि हाम्रो पार्टिमा पहिला छलफल पनि भएको थियो । रेवती भण्डारीलाई त्यहाँ लग्यो भने राम्रै हुन्छ भन्ने सल्लाह भाथ्यो । त्यो सुखद् थियो पार्टीका लागि पनि । तर वहाँ जानु हुन्छ कि जानु हुन्न भन्ने त्यसको टुंगो थिएन ।
त्यो विषयमा सहजीकरण गर्नको लागि रेवती घिमिरेलाई भनेका थियौँ । रेवती घिमिरेले रेवती भण्डारी जानुहुन्न रे भनेर खबर ल्याउनुभएपछि हामीले उपाध्यक्ष लिने भन्ने कुरामा सहमती जनाएका थियौं ।
त्यसअघि मैले पनि अन्तिममा रेवती भण्डारीसँग यो विषयमा सोध्दा वहाँले ‘म सोलुमा छु । भोली पर्सि कहिले आउँछु, त्यहाँबाट काठमाडौँ जानु पर्ने छ । म जनता कलेजमा जाने अवस्था छैन । म जान्नँ । तपाइहरु अर्को निर्णय गरेर जानुस् ।’ भनेर भन्नु भयो ।
मैले रेवती कामरेडलाई कलेजमा रोक्ने कोसिस गरेँ भनेर जसरी विपक्षीले र केही व्यक्तिहरुले प्रचार गरे, त्यो गलत हो । रेवती कामरेडलाई रोक्ने पार्टीको निर्णय थिएन । न कसैले आदेश दिएको थियो । वहाँ हाम्रो नेता हो । वहाँले नेतृत्व लिने इच्छा गर्दा वहाँलाई स्थापित गराउने पार्टीको धर्म हुन्छ । तर यस विषयको एकदमै गलत प्रचार गरियो ।
तर पछि वहाँ (रेवती भण्डारी)ले अप्रत्यासित नोमिनेसन गर्नुभयो । संस्थागत हिसाबमा नगर कमिटिसँग छलफल भएकै थिएन । अध्यक्ष ज्वाला कामरेडसँग पनि छलफल भएको रहेनछ । वहाँको नोमिनेसनपछि हामी बसेर छलफल गर्यौं र वहाँले इच्छा देखाउँदा त्यो राम्रो कुरा हो भनेर पार्टीले निर्णय गरेर गयो ।
चुनाव हुँदा चन्द्र कम्रेड हार्नु भयो । कसरी हार्नु भयो ? पार्टीले समिक्षा गर्ला, तर वहाँ हार्नु दुःखद् थियो ।
तर चुनावपछि केही सञ्चारमाध्यमले पनि मेरो कुरै समावेश नगरी एकतर्फी आरोप लगाए । त्यो नियोजित, कपोकल्पित र वास्तविकताभन्दा बाहिरको विषयलाई प्रचार गरे ।
विधि र प्रक्रियाको पक्षमा
मलाई खोटाङको एउटा स्कुलमा नि.मा.वि राहत दरबन्दीको नियुक्ति गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितीले दिएको थियो । त्यो जागिर मैले खाएको भए अहिले म स्थायी मास्टर हुन्थेँ । तर मलाई यो टिको लगाएर, विधि नपुर्याइकन दिएको जागिर खानु बेकार हो भनेर मैले जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङमा निवेदन दिएर प्रक्रिया विपरित दिएको जागिर अवैध छ, मेरो जागिर खुस्काइ देऊ सरकार भनेर निवेदन गरेँको थिएँ । विधि र प्रक्रिया र पार्टीको सिद्धान्तलाई सधैं शिरोधार्य गरेर हिडेको छु ।
(नेकपा इटहरीका नगर सचिव काशीनाथ दंगालविरुद्ध अहिले नेकपा इटहरीको एउटा समुह उत्रिएको छ । खासगरी उनी इटहरीको नेकपा राजनीतिमा नेकपा नेता भीम आचार्यले एक्कासी स्थापित गराएको नेताको रुपमा उक्त समुहले आलोचना गर्दै आएको छ । इटहरीस्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीलाई रोक्न दंगालको सक्रिय सहभागिता थियो भनेरसमेत आलोचना भएको छ । तर दंगालले भने आफू एमालेमा निकै लामो समयदेखि सक्रिय रहेको र कसैलाई रोक्न नलागेको भन्दै पहिलो पटक न्यूजलयमार्फत् स्पष्टिकरण दिएका छन् । –सं.)